Sony ichangobva kusimbisa kuuya kweiyo PlayStation 5 ye2020 | Kubva kuLinux
Sony yakangosimbisa kusvika kwePlayStation 5 ya2020
Ivo vaburitswa zvishoma zvishoma nezve zvakatemwa zveiyo ramangwana PlayStation 5 Sony's (PS5), inotevera-chizvarwa koni kuti ibudirire PlayStation 4. Kunyangwe iyo PS5 isati yaunzwa zviri pamutemo, Lisa Su, CEO we AMD, (hazvizivikanwe kuti zvaive nemaune here kana kuti nekutadza) akazivisa mune tweet , que iyo yemberi nyaradzo kubva kuJapan tech hofori Chipo chetsika chakavakirwa pane x86 Zen 2 AMD yekuvakisa ichaendeswa yakaunzwa panguva yekuunzwa EPYC Roma uye NAVI machipisi, iyo yekumashure-VEGA GPU dhizaini.
Kusvikira imwe pfungwa iyi koni yaizivikanwa kutsigira kusvika ku8K kuratidza, 3D odhiyo kuburikidza neyetsika yeyuniti inosanganisirwa mukoni, SSD-based kuchengetedza system kudzikisa mutoro nguva uye raytracing (hunyanzvi hwekuenzanisira mafambiro emwenje mwenje kuteedzera kusangana kwakaomarara munzvimbo dze3D) padanho rehardware. Inofanira zvakare kuenderana nemitambo yePS4 uye kubata 4K Blu-ray discs kusvika ku100GB.
Nhasi zvakafumurwa kuti chinhu chepakati cheiyo PlayStation 5, pamwe iri APU, iine 7nm TMSC yekurekodha tekinoroji, ichave iri tsika 8-musimboti / 16-shinda AMD CPU yakatorwa kubva kuRenzen 3000 nhepfenyuro (inozivikanwawo seMatisse). Zvine musoro, inofanirwa kupa chiyero chekuita chakafanana neiyo Ryzen 7 3700 kana kunyangwe zvirinani kupfuura iyo Ryzen 7 3800X. Iyo PlayStation 5 ichave izarurwe zvizere gore rinouya.
Maka Cerny, Senior Systems Dhizaina yeiyo PS5, munguva pfupi yapfuura akataura nezvekuvandudza kune mushandisi interface yemuchina uye izvo zvinokanganisa kutonga kutsva.
Nezve kuvandudzwa kweUI, Cerny aburitsa pachena kuti maseva evatambi vazhinji achapa iyo koni pamwe nezvose zviitiko zvinogona kusvika panguva chaiyo, nepo single player mitambo ichizopa ruzivo pane izvo mamishini zvaunogona kupedzisa uye nemubairo waungagone kuzviita, zvichiratidza kuti sarudzo dzese idzi dzinozoonekwa mumushandisi interface.
Chiaki: Tamba Yako PlayStation 4 Vhidhiyo Mitambo Kubva kune Yako Linux Desktop
Uyewo, iyo skrini yekumba icharatidza iyo data yemutambo kunyangwe isiri kumhanya uye iyo inobvumidza zvikamu zvemutambo kutambiswa zvakananga zvichibva pane data rakaratidzwa.
Nezve kuvandudzwa kwemutungamiriri mutsva wePS5, Mark Cerny anoti:
ine maficha nyowani senge 'Adaptive Trigger' pane iyo L2 / R2 mabhatani ayo anopa akasiyana mazinga ekurwisa kwechiitiko chekupfura, Archery kana kutyaira pane mutambo weconsoon iri padyo neicho chaicho kana inosiyana nemutambo (mamiriro mugwagwa, mhando yemotokari kana chombo chakashandiswa, kukakavara kunoiswa patambo).
Uku kudzora kutsva kwaizove neyakawedzera mhinduro haptic, USB-C chinobatanidza uye bhatiri hombe.
Nezve kuvandudzwa kwenzvimbo yekuchengetedza yeiyo PS5, Cerny akacherekedza kuti vanogadzira mutambo vanowanzo dhindisa data padanho rekumisikidza saka zvinowanikwa nyore panguva yekutakura. Sekureva kwaCerny, mhinduro nyowani yekuchengetedza kubva ku ps5 inogona kubvumira vanogadzira kuti vapedze kuita uku uye voregedzera imwe nzvimbo Kuchengeterwa pamadhiski evashandisi.
Sony inofanirwa zvakare kubvumira vanogadzira kuti vaone zvimwe zvikamu zvemutambo zvinogona kuiswa kana kubviswa kana zvichidikanwa.
Naizvozvo, zvichave zvichibvira kubvisa chete imwechete mutambi modhi kubva mumutambo uye chengetedza iyo yemidhi yakawanda nzira chete yekuchengetedza nzvimbo pane mudziyo wekuchengetedza. Pane yekupedzisira poindi, iyo kambani yakati:
"Panzvimbo pekubata mitambo seyimwe hombe yedhata, isu tinoronga kubvumidza kuwana kwakananga kune iyo data."
Asi sezvazvinowanzoitika patekinoroji yekambani, kubudirira kwenguva refu kweizvi zvinyaradzo nevanogadzira zvinogona kuvimba nekuti zvinowirirana here kana kuti kwete nezvino tungamira zviviri zvinowirirana: Microsoft Project Scarlett neMicrosoft PlayStation 5. . Sony.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Sony yakangosimbisa kusvika kwePlayStation 5 ya2020
Linux Mint inogovera nhau dzayo nyowani logo
TensorFlow 2.0 inosvika, rakavhurika sosi raibhurari yekudzidza kwemuchina